Chelsea oo 1-0 kaga badisay koxda Arsenal | Xeegonews.com
Chelsea oo 1-0 kaga badisay koxda Arsenal
Kooxda Arsenal ayaa weysay fursad ay dib ugu qaban laheyd hogaanka horyaalka Ingiriiska kadib marki ay 1-0 ku lumisay ciyaarti adkeyd ee ay caawa la ciyaartay Chelsea.
Kulankan oo ka dhacay garoonka Arsenal ee Emirates ayey Chelsea ku xaqiijisay guul u u qalantay iyada oo ka faa,ideysatay kasaaridii garoonka laga saaray mid ka mid ah ciyaartooyda Arsenal, waxaana goolka guusha u dhaliyey weeraryahanka reer Spain Diego Costa.
Arsenal marnaba kama aysan soo kabsan kaarkii casaanka ahaa ee laga siiyey Per Mertesacker daqiiqadii 18-aad. Garsoorihi ciyaarta dhex dhexaadinayey Mark Clattenburg ayaa markiiba ganaaxaas ku abaalmariyey daafaca Arsenal kadib marki uu dhulka dhigay gooldhaliye Costa . Shan daqiiqo kadibna Costa waxaa uu saxiixay goolkii guusha.
Goolkaasi oo uu Costa dhaliyey oo uu soo karosay Branislav Ivanovic ayey Chelsea ku xaqiiqsiay guul muhiim ah oo ay soo xareysatay iyada oo ku ciyaareysay meel ka baxsan garoonkeeda. Waa kulankii sagaalaad oo ka tirsan Premier League oo xiriir ah oo ay Chelsea ka badineyso Arsenal.
Hadii ay guuleysan laheyd Arsenal waxa ay dib u qaban laheyd hogaanka, hase yeeshee hada waxay joogtaa booska sadexaad. Waxaa kaalinta koowaad ku jirta Leicester City oo sadex buundo ka sarreyso kooxda kaalinta labaad ku jirto ee Manchester City.
Natiijadan ayaa waxa ay dhabarjab weyn ku tahay hamiga Arsenal ay ka laheyd hanashada horyaalka England oo ay sanadkaan dooneysay in ay qaado kadib wax ka badan 10 sano oo ay sugeysay.
Ciyaar kale oo dhacday maanta ayaa waxa ay dhax martay kooxaha Everton iyo Swansea City, waxa ay 2-1 guusha ku raacday kooxda Swansea.
© 2016, ↑ Xeegonews.com